hoy ny talen’ny kabinetra, Manda Ravelojaona, ary mijery ny fivoaran’ity valanaretina Coronavirus ity izay hita fa efa ho voafehy ihany. Miankina amin’ny filankevitry ny minisitra moa, raha ny fantatra ny herinandro teo no amoahana ny datim-panadinana . Ny mpampianatra koa dia manara-maso eny anivon’ny fiarahamonina eny miaraka amin’ny komity loharano. Raha vao maheno na dia tranga mampiahiahy fotsiny aza isika dia efa mandray fepetra mikasika izay, hoy izy. Isaorana ny mpanabe fa sady miasa manabe ny zaza malagasy no miasa indrindra koa amin’ny tsy hiparitahan’ity valanaretina ity. Tsy maintsy arindra ny fahafaha-mandray ireo mpianatra anaty kilasy satria tsy maintsy hajaina ny fepetra. Eo ihany koa no tsy maintsy hijerena vahaolana maharitra ho an’ireo kilasy an-tenantenany. Mandeha ny asan’ny minisitera, hoy izy, na dia eo aza ny fahamehana. Mizara ny fifanarahana andiany faha 6 ho an’ny mpampianatra FRAM raisina ho mpiasam-panjakana izao izahay, ohatra. Eo koa ny fanomanana ny fandraisana sahady ny andiany faha 7. Ny asa eo amin’ny resaka foto-drafitrasa dia mandeha ary ho jerena amin’ity herinandro ity, hoy hatrany izy.